Marriott nwere ọhụụ 2020 mgbe ọ na-abịa ịgbasa na Asia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Marriott nwere ọhụụ 2020 mgbe ọ na-abịa ịgbasa na Asia
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Site na 15th Mgbakọ Nkwari akụ nke Hotel - South Asia, Marriott International taa kwupụtara ọkwa mmeba ọ gara n'ihu na Asia-Pacific na ya 2020 ọhụụ - ihe ike ike lekwasịrị anya nwere 1000 hotels meghee site na njedebe nke 2020. Ọhụụ a nwekwara ike ịmepụta ihe ruru 50,000 ohere ọrụ ọzọ maka mpaghara ahụ. Na 2019 naanị, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ịgbakwunye ihe ruru ụlọ nkwari akụ ọhụrụ 100 ma ọ bụ nso ọnụ ụlọ 20,000 na mpaghara ahụ, yana ọtụtụ mbupute mbata na Australia, Hong Kong, Philippines, Nepal na India. Pọtụfoliyo Marriott International nọ na Asia Pacific ugbu a gụnyere ihe karịrị 710 njirimara na mba 23 na mpaghara, na-arụ ọrụ n'okpuru 23 nke ụlọ ọrụ 30 ụlọ ọrụ ụwa.
“Obosara na ịdị omimi nke akara ụkwụ Marriott International pụtara na anyị nwere ike ịnye ndị njem ohere ịnweta ọtụtụ ebe, ụdị na ahụmịhe, ọkachasị site na Marriott BonvoyTM, usoro ihe omume anyi na-eduzi njem, ”ka o kwuru Craig S. Smith, Onye isi oche na onye isi njikwa, Marriott International Asia Pacific.
“Dị ka mkpa ka anyị size bụ anyị nkwa na-anapụta enweghị nkebi na àgwà ahụmahụ anyị ọbịa na-ika Njirimara. Onye njem nke oge a chọrọ ezigbo ahụmịhe, nke ahaziri iche na nke mgbanwe, ma ọ bụ maka ọrụ ma ọ bụ maka obi ụtọ, dị ka ụzọ isi gbasaa mbara igwe ha na nghọta miri emi nke ụwa. Dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ile ọbịa nke ụwa, ọ dị na DNA anyị ịgbalịsi ike ịbụ akụkụ nke oge na ncheta kachasị amasị ndị ọbịa. Anyị raara onwe anyị nye Marriott International Asia nke Pacific ụlọ ọrụ njem kachasị amasị gị. ”
China, India na Southeast Asia dị ka Marriott International's Growth Drivers na Region
Marriott International nọ n'ọnọdụ nke ọma iji nweta usoro njem mba ụwa na China, India, na Indonesia, mba atọ n’ime mba anọ ndị mmadụ kacha biri n’ụwa.
China na-aga n'ihu na-abụ onye na-anya ụgbọ ike kachasị ike maka Marriott International na Asia Pacific, nwere ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 300 na paịpụ. Nke a na-akpata ihe karịrị pasent 50 nke pipeline ụlọ ọrụ ahụ Asia Pacific. N'afọ a naanị, Marriott International na-achọ imepe karịa ụlọ nkwari akụ 30 na China, gụnyere nke mbụ JW Marriott Marquis Hotel na China, Ime-ulo 515 JW Marriott Marquis nkwari akụ Shanghai Pudong nwere nri 6 na ebe a na-a beụ ihe ọ beụ beụ; na nke mbụ Renaissance Hotel na Fujian ógbè na ndokwa oghere nke Renaissance Xiamen Resort & Spa na nkeji nke anọ nke 2019. Na mpụga nke Chile China, na St. Regis ika atọrọ na mpụta mbụ na oghere nke St. Regis Hong Kong emi odude ke mbụk district Wanchai.
Na 100 na-adịbeghị anyath Marriott International nkwari akụ milestone na-eme ememe na 2018, India na-aga n'ihu ịbụ ụlọ ọrụ nke abụọ kachasị ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ Asia Pacific nwere ihe karịrị 50 onwunwe na pipeline. Marriott na-atụ anya iru ụlọ karịrị 30,000 nke mepere emepe India site na njedebe 2023. Nyere India akụnụba siri ike na ịrị elu n'etiti klaasị, mba ahụ na-aga n'ihu na-eweta ohere uto na-akpali akpali, na-eme ka ọchịchọ siri ike maka ụdị ọrụ nhọrọ Marriott na ọchịchọ na-eto eto maka ọkwa ya dị elu na okomoko. Companylọ ọrụ ahụ na-atụ anya ibido Tribute Portfolio brand na India, na oghere nke Port Muziris, Kochi, a Tribute Portfolio nkwari akụ slated maka nkeji nke abụọ nke 2019.
Na ASEAN na-adịbeghị anya (Association nke Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia) Ndị njem nlegharị anya, ndị ASEAN National Tourism Organisations gosipụtara mbọ ha gbakọtara iji kwado ahịa iji kpalie njem gaa Southeast Asia. Marriot International dị njikere ịnabata ndị njem a, nwere ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 140 debanyere aha na ya Southeast Asia pipeline, na Indonesia na-eduga uto, izute na-eto eto chọrọ nke njem na njem. Na Philippines, companylọ ọrụ ahụ na-atụ anya na ihe karịrị okpukpu atọ ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ ya site na 2023. Sheraton, Marriott International's global brand, nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya na mba ahụ na oghere nke Sheraton Manila nkwari akụ.
Marriott International na-aga n'ihu na uto ya na mpaghara Pacific, yana ụlọ oriri na ọ 50ụ anticipụ 2020 na-atụ anya imeghe site na XNUMX. Australia kwesiri ihu otutu nkpuputa nke otutu na abia abia, tinyere The Luxury Collection na Ritz-Carlton. Tasman, Lulọ oriri na ọ Luụ Luụ okomoko, na-atụ anya imeghe na Hobart na ngwụsị 2019, na ọnụ ụlọ 205 The Ritz-Carlton Perth a ga-emepe na June 2019. Element Hotels, Marriott International's eco-conscious brand, na-atụ anya ibido na Australia na oghere nke Element Melbourne Richmond na Q3 afọ a.
Marriott International Anya Anya Ebe Ọhụrụ Asia Pacific ya na Marriott BonvoyTM
Na mbido afọ a, Marriott webatara Marriott BonvoyTM - Mmemme njem Marriott International na-anọchi Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards®, na Starwood Preferred Guest® (SPG). Mụ na Marriott BonvoyTM, Ndị njem nwere ike ịnweta ụlọ ọrụ ahụ ewepụtara ọhụrụ Asia Pacific website na egosiputa ihe omuma na ihe omuma nke meputara ma nye onyinye nke ihe ozo Asia Pacific. Companylọ ọrụ ahụ nọgidere na-elekwasị anya na iweta ụlọ oriri na ọ newụ newụ ọhụrụ na ebe ndị ọbịa anyị na-achọpụtabeghị na Marriott International nke mbụ Myanmar eme atụmatụ maka 2020 na oghere Sheraton Yangon Hotel.
Ka ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye, ọdịbendị na-anọgide na Bedrock maka Forga nke Ọma
Marriott International si Asia Pacific ọhụụ nwere ike ịmepụta ihe ruru 50,000 ọrụ ọhụụ na Asia Pacificsite na njedebe nke 2020. Njem na njem na-enye ndị nwere ahụmịhe ohere ma ọ bụ ndị ọhụụ na ụlọ ọrụ ile ọbịa. Nnyocha nke World Council and Tourism Council (WTTC) mere ka ọ pụta ìhè na 1 n'ime ọrụ 5 ọhụụ e kere ụwa niile nwere ike ịbụ ndị njem na njem nleta.
Ka ụlọ ọrụ ahụ na-eto, nke a pụtakwara na enwere ohere maka ndị anyị na ha na-emekọ ihe iji zụlite ọrụ ha ma si otú a meziwanye ọrụ ha. Nke a bụ ụzọ ọzọ Marriott International si elekọta ndị ya na ha so. Site na ọdịbendị nke na-enye ndị mmekọ ike ibi ndụ kachasị mma ha - ibute ndị mmadụ ụzọ bụ uru ụlọ ọrụ ahụ kemgbe Marriott hiwere ihe karịrị afọ 90 gara aga. Marriott wuru azụmahịa ya n’ilekọta ndị ya na ha na-emekọ ihe, ndị na-elekọta ndị ọbịa anyị. Companylọ ọrụ ahụ kwenyere na ịmepụta gburugburu ebe obibi dị iche iche na-ewusi ọdịbendị na obodo ike ma na-eme asọmpi. Marriott International enweela mmeri Aon Hewitt si onye kachasị mma n'ọrụ afọ ise sochirinụ Asia Pacific.